Suuq ku yaalla Imaaraadka oo dab ka kacay. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Suuq ku yaalla Imaaraadka oo dab ka kacay.
Suuq ku yaalla Imaaraadka oo dab ka kacay.
Wararka ka imaanaya dalka Isu-tagga Imaaraadka Carabta ayaa sheegaya in Imaaraadda Ajman suuq weyn oo ku yaala uu dab qabsaday, abaare saacaddu markii ay aheyd 6:30pm, xilliga wadankaas, sida uu baahiyay wargeyska Gulf News ee ka soo baxay Imaaraadka.
Waaxda dab damiska ee difaaca madaniga loo yaqaano ee Imaaraad Ajman ayaa goor dambe ku guuleystay in ay xakameeyaan dabka, ayagoo kaashanaya waaxiyaha dab damiska Dubai, Shaariqa (Sharjah) iyo Ummul Quwain.
Lama soo warinin wax khasaare nafeed ah oo dabkaas sababay, waaxda difaaca madaniga ah ayaa hadda ku howlan sidii loo hagaajin lahaa goobtii dabka ka kacay.
Suuqa dabka qabsaday ayaa ah goob muhiim ah oo dadweynaha ka adeegtaan sidoo kalena waxaa ku yaalaa xaafad warshado badan ku yaalaan.Muuqaalo lagu baahiyay qalabka warbaahinta ayaa waxaa ka muuqanaya holac iyo qiiq qariyay dhismaha suuqa.
Previous articleShiinaha oo Xabsiga ka daayay Nin 27 sano si qalad ah ku xirnaa.
Next articleCiidamada Danab oo burburiyay saldhig ay argagaxisada ku lahaayeen Jubbooyinka.